Start Somali – Pro Familia
Mawduucyo muhiim ah
Halkeen caawimaad ka heli karaa?
Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato
Waa maxay gudniinka dumarku?
Waa maxay cawaaqibta ka dhalanaysa gudniinka dumarku?
Maxay tahay sababta aan gabdhaha loo gudayn?
Waddamadee ayaa gabdhaha la gudaa?
Gudniinka gabdhaha waa la mamnuucay!
Ka qaybqaado dhammaynta gudniinka gabdhaha
Dukumentiyo iyo walxo caawimaad leh
Sharraxaadda ereyada loo adeegsaday boggan
Miyuu gudniinta haweenka saamayn kugu yeeshay oo miyaad u baahan tahay caawimaad? Miyaad qabtaa su’aalo deg-deg ah ama rabtaa inaad ogaato wax ka badan?
Boggaan internet waxaad ka heli doontaa
lambarada telefoonka iyo cinwaanada dad ama xarumo talo-bixin aad aamini kartid,
caawinaad haddii uu xanuun ku haayo, dareemeyso cabsi ama aadan aqoon sida laga hadlo mowduucaan ama sida loo ilaaliyo gabadhaada ama saaxiibadaada,
macluumaad ku saabsan wuxuu yahay gudniinta haweenka, saamaynta uu yeesho, sababta loo sameeyo iyo meesha laga sameeyo.
Su’aalo deg-deg ah, waxaad caawinaad ka heli kartaa halkaan:
Xarunta la-talinta iyo macluumaadka ee dumarka soogalootiga ah iyo qoysaskooda
Mädchenhaus Kassel 1992 e. V. (Hoyga Gabdhaha)
“Xadgudubka ka dhanka ah haweenka” khadka
iyo taageerada onlayn
Xanuun ayaan dareemayaa, gaar ahaan caloosha iyo xilliga caadada
Gabdho iyo haween badan oo la guday ayaa dhibaatoonaya sababtoo ah waxay leeyihiin caabuq ama dhiiggooda caadadu ma soo bixi karo. Haddii aad dareento xanuun, waa inaad booqataa dhakhtarka dumarka. Dhakhaatiirta dumarku waxay daaweeyaan gabdhaha iyo haweenka waxna way ka qaban karaan xanuunkaaga. Kharashaadka booqashooyinka dhakhtarka waxaa daboolaya caymiska caafimaadka. Cinwaanada waxaad ka heli kartaa xarumaha latalinta.
Uur ayaan leeyahay
Waxaa jira umulisooyin, dhakhaatiirta dumarka iyo isbitaallo ku yaal Jarmalka kuwaas oo khibrad u leh taageeridda haweenka la guday markay ummulayaan. Kala hadal iyaga gudniinkaaga sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan si ay kuu siin karaan daaweyn fiican. Waxaa kale oo aad talo ka heli kartaa xarunta la-talinta ee pro familia ama urur kale.
Ma garanayo in aan gudanahay
Waxaa jira gabdho iyo haween aan garanaynin inay gudan yihiin. Haddii la guday markay yaraayeen, waxaa laga yaabaa inaysan ka warqabin. Intaa waxaa sii dheer, gabdhaha ayaa inta badan ay ku adkaata inay kala hadlaan arrintan hooyadood ama eheladooda kale. Haddii aad wax su’aalo ah ka qabtid tan, fadlan la xiriir xarunta la-talinta ama dhakhtarka dumarka.
Waan ka cabsanayaa inaan tago dhakhtar
Gabdhaha iyo haweenku waxay xaq u leeyihiin inay helaan daryeel caafimaad oo wanaagsan. Fadlan nala soo xiriir haddii aad raadinayso dhakhtar karti leh ama haddii aad jeceshahay inaad qof aad aamini karto u sheegto dhacdada khibradaada. Waxa jira dhakhaatiir ku sugan Jarmalka oo aqoon u leh daaweynta gabdhaha iyo haweenka la guday si sax ah oo wanaagsan. Waxaa kale oo ay wax ka qaban karaan xannuunkaaga muddada caadada ama xilliga galmada iyada oo loo marayo nidaamyo qalliin oo yar. U sheeg dhakhtarka inaad gudantahay – tani waxay sahli doontaa baaritaankaaga iyo daaweyntaada.
Haddii tani ay tahay ballantaadi ugu horreysay ee aad la yeelanayso dhakhtarka dumarka: Gabdhaha iyo haweenka qaarkood waxay ka cabsadaan in baaristu ay ka qaado bikradnimadooda. Taasi run ma ahan. Xitaa haddii ay jiraan dhaawacyo yar yar oo soo gaara xuubka bikrada (oo sidoo kale loo yaqaan hayman), kuwanu si dhakhso leh ayey u bogsadaan. Ma jiro wax nabar ah oo ku samaysmi doona. Tani waa muhiim maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay in qofna, xitaa dhakhtarka dumarka, uusan sheegi karin inaad galmo samaysay iyo in kale. Xitaa kaddib dhalmada, gabadhu waxay wali u egtahay sidii markii hore.
Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg: Waa maxay cawaaqibta ka dhalanaysa gudniinka dumarku?
Dhakhtarkee ayaa mas'uul ka ah waxa?
Ka hadal arrinkaa
Way ku caawin kartaa wayna kuu fiican tahay inaad ka hadasho mowduucyada sida gudniinka dumarka. Tani had iyo jeer uma fududaan midkeenna. Gudniinka dumarka waxaa badanaa loo fahmay inay tahay dhaqan ay tahay in la ixtiraamo, taas oo aan laga hadlin oo aan wax su’aalo ah la iska weydiin karin. U tag qof aad ku kalsoon tahay oo aad raaxo ku dareemayso: saaxiib, shaqaalaha bulshada, macallin ama dhakhtar. Way ku dhagaysan doontaa oo way ku taageeri doontaa.
Saaxiibtayda / xaaskayga waa la guday. Taasi maxay aniga micno ii samaynaysaa nin ahaan?
Gudniinku wuxuu ku yeelan karaa cawaaqib jireed iyo mid nafsiyadeed xaaskaaga ama saaxiibtaa. Waxa kale oo dhici karta in ficilka galmadu uu sababayo xanuunkeeda. Haddii aad wax su’aalo ah qabtid, waxaad la xiriiri kartaa xarumaha la-talinta. Ballamada halkaas ka jira waa bilaash.
Maxay yihiin cawaaqibtu?
Waxaan u safraa waddanka hooyo ee waalidkey
Fasaxyadu badanaa waa fursad ay qoysasku ku laabtaan waddankii ay ka yimaadeen oo ay ku booqdaan eheladooda kale. Haddii aad ka qabtid shaki ama cabsi safarka, ka hel caawimaad dadka kaa caawin kara inaad la hadasho xubnaha qoyskaaga ee Jarmalka. Ha ka cabsan inaad kala hadasho dadka la aamini karo arrintaan, si aad ula xiriirto xarunta la-talinta ama si aad wacdo khadka caawinta 08000 116 016.
Gudniinka gabdhaha waa la mamnuucay. Maxay taasi macnaheedu tahay waalid ahaan?
Hooyo ama aabbe ahaan, waxaad mas’uul ka tahay ilaalinta carruurtaada. Waa muhiim inaad fahanto micnaha sharciga gudniinka gabdhaha iyo waxa dhici doona hadaadan gabartaada ka ilaalin gudniinka gabdhaha.
Sideen u ilaalin karaa gabartayda markay u safarayso waddankaygii hooyo?
Ugu diyaari naftaada si wanaagsan safarka. La xiriir xarumaha la-talinta ee ku siin kara macluumaad waxtar leh iyo dukumentiyo. Ka hel taageero dadka kaa caawin kara inaad la hadasho xubnaha qoyska. Horay ka sii eeg xiriirrada caawinta ee waddankaaga hooyo ee kaa caawin kara inaad gabartaada ilaaliso (tusaale ahaan, Guddiga Qaranka ee Kahortagga Gudniinka Fircooniga ah iyo ururada/NGO-yada maxalliga ah ee ka hawl-gala kahortagga gudniinka fircooniga ah). Gabadhaada ha baaro dhakhtar kahor intaadan safrin oo weydiiso caddayn caafimaad oo sheegaysa in gabadhaada aan la gudin. Si cad ugu sharrax qoyskaaga go’aankaaga ah in aan gabadhaada la gudayn. U sheeg qoyskaaga in gudniinka fircooniga ah la isku ciqaabo sharciga Jarmalka, xitaa haddii lagu sameeyo meel ka baxsan Jarmalka, iyo in lagugu xukumi doono gudaha Jarmalka oo aad waayi doonto sharcigaaga deganaanshaha. U sii caddayn ahaan qoraal afkaaga hooyo ku qoran
12138124/schutzbrief-gegen-genitalverstuemmelung/). Mar kasta ka ag dhawaw gabadhaada. La hadal iyada una diyaari si ay u fahamto waxa gudniinka gabadhahu yahay, in aan qofna ku samayn karin iyada oo ay tahay inay kuu timaaddo haddii ay aaminsan tahay inay khatar ku jirto.
Ma doonayo in gabadhayda la gudo / Sideen u ilaalin karaa gabadhayda?
Waa muhiim in hooyada iyo aabaha labaduba ay si firfircoon ugu dadaalaan ilaalinta gabdhahooda. Caawinaad ayay leedahay tani. Dalka Jarmalka, rag iyo dumar fara badan oo ka kala socda dalal ay ka mid yihiin Itoobiya, Ereteriya, Gini, Soomaaliya iyo Suudaan ayaa hadda ay ka go’an tahay in la joojiyo gudniinka fircooniga ah. Way ku raaci karaan oo taageeri karaan wada hadalada qoyska ama bulshada. Haddii aad xiisaynayso, la xiriir xarumaha la-talinta.
Iyadoo lala kaashanayo:
Waxaa kafaala qaaday:
Ka bax websaydka